ဘီဒိုလဲရှင်းသွားမယ်…… ပိုက်ဆံအိတ်လဲဖောင်းလာမယ်……. – ADS Myanmar Blog
အလှအပကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ဘီဒိုဟာ အဝတ်အစား ၊ Fashion Accessories ၊ Cosmetics တွေနဲ့ အမြဲလိုလိုပြည့်နေပြီး ရှုတ်ပွနေတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရှင်းရှင်း အသစ်တွေ ထပ်ဝယ်လာလိုက် ပြန်ရှုပ်ပွသွားလိုက်နဲ့ပေါ့…..
အခုဆိုရင် Social Network တွေနဲ့ Online Shopping Page တွေအများကြီး ပေါ်လာတာကြောင့် ရောင်းတဲ့သူတွေဆီမှာ ပစ္စည်းအသစ်တွေ၊ Update မဖြစ်တော့တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ၊ order မှာပြီး မယူဖြစ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေများနေနိုင်သလို၊ ဝယ်တဲ့ သူတွေဆီမှာလဲ ဒီဇိုင်းအသစ်တွေ၊ မှာပြီးမတော်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ပုံနေမှာပါ…
အဲ့လိုအခက်အခဲနဲ့ တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင် ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်….
(၂) Garage Saleလုပ်ခြင်း ( နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာအသုံးမလိုတော့တဲ့ ပစ္စည်းအသစ်အဟောင်း တွေကို ရက်သက်မှတ်ပြီး အိမ်ရဲ့ ကားဂိုထောင်၊ ခြံဝင်းထဲမှာ တစ်နိုင်တစ်နိုင်ပြုလုပ်တဲ့ဈေးရောင်းပွဲလေးပါ )
(၃) အလှူအတန်းသဘောမျိုး ဈေးလျော့ရောင်းခြင်း
(၄) အခမဲ့ကြော်ငြာ website တွေအသုံးပြုခြင်း တွေပဲဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီအချက်တွေထဲကမှာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်လာပြောင်းလဲလာတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး မြန်မာ့ နံပါတ် (၁) အခမဲ့ကြော်ငြာ website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ads.com.mm မှာ ပျိုမေတို့ဆီမှာ ပိုနေတဲ့ ပစ္စည်းအသစ် အဟောင်း အားလုံးကို ကြော်ငြာတင်ပြီး ငွေပြန်ပေါ်အောင်လုပ်နိုင်ပါပြီ…..
ads.com.mm အခမဲ့ကြော်ငြာ website ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်….
(၁) Designer တွေရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ပြန်လည်စုဆောင်းဖို့ရှာဖွေနိုင်မယ်
(၂) branded ပစ္စည်းတွေကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ်
(၃) ဝင်ငွေပြန်တိုးလာနိုင်သလို ချွေတာရာလဲရောက်ပါတယ်
(၄) ရောင်းသူနဲ့ ဝယ်သူတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ဝယ်ယူနိုင်တာကြောင့် Fashion ဝါသနာပါသူ အချင်းချင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့ နိုင်ပါတယ်
(၅) ကိုယ့်ရဲ့ အရင် Ex ကပေးထားတဲ့ အရုပ်တွေ ၊ ဖိနပ်တွေ၊ လက်ကိုင်အိတ်တွေ ကိုလည်း မလိုချင်တော့ ရင်ပြန်ရောင်းလို့လဲရသေးတယ်နော်……
ဒါကြောင့်မို့ ads.com.mm ကိုအသုံးပြုပြီး ဝင်ငွေပြန်တိုးအောင် ပျိုမေတို့ရဲ့ ဘီဒိုတွေကို အခုပဲရှင်းလိုက်ကြရအောင်……
အလှအပကှိုကတြဲ့ မိနြးကလေးအမွားစုရဲ့ ဘီဒိုဟာ အဝတအြစား ၊ Fashion Accessories ၊ Cosmetics တှနေဲ့ အမှဲလိုလိုပှညြ့နပှေီး ရှုတပြှနတတေပြါတယြ။ ဘယလြောကရြှငြးရှငြး အသစတြှေ ထပဝြယလြာလိုကြ ပှနရြှုပပြှသှားလိုကနြဲ့ပေါ့…..
အခုဆိုရငြ Social Network တှနေဲ့ Online Shopping Page တှအမွေားကှီး ပေါလြာတာကှောငြ့ ရောငြးတဲ့သူတှဆေီမှာ ပဈစညြးအသစတြှေ၊ Update မဖှစတြော့တဲ့ ဒီဇိုငြးတှေ၊ order မှာပှီး မယူဖှစတြဲ့ ပဈစညြးတှမွေားနနေိုငသြလို၊ ဝယတြဲ့ သူတှဆေီမှာလဲ ဒီဇိုငြးအသစတြှေ၊ မှာပှီးမတောတြဲ့ အဝတအြစားတှေ ပုံနမှောပါ…
အဲ့လိုအခကအြခဲနဲ့ တှကှေုံ့လာပှီဆိုရငြ ဖှရှငြေးဖို့နညြးလမြးတှရှေိပါတယြ….
(၂) Garage Saleလုပခြှငြး ( နိုငငြံခှားမှာဆိုရငြ ကိုယြ့ဆီမှာအသုံးမလိုတော့တဲ့ ပဈစညြးအသစအြဟောငြး တှကေို ရကသြကမြှတပြှီး အိမရြဲ့ ကားဂိုထောငြ၊ ခှံဝငြးထဲမှာ တစနြိုငတြစနြိုငပြှုလုပတြဲ့စွေးရောငြးပှဲလေးပါ )
(၃) အလှူအတနြးသဘောမွိုး စွေးလွော့ရောငြးခှငြး
(၄) အခမဲ့ကှောငြှာ website တှအသေုံးပှုခှငြး တှပေဲဖှစပြါတယြ…..
ဒီအခကွတြှထေဲကမှာ လကရြှိမှနမြာနိုငငြံရဲ့ တိုးတကလြာပှောငြးလဲလာတဲ့ နညြးပညာတှနေဲ့ အသငြ့တောဆြုံး မှနမြာ့ နံပါတြ (၁) အခမဲ့ကှောငြှာ website တစခြုဖှစတြဲ့ ads.com.mm မှာ ပွိုမတေို့ဆီမှာ ပိုနတေဲ့ ပဈစညြးအသစြ အဟောငြး အားလုံးကို ကှောငြှာတငပြှီး ငှပှနေပြေါအြောငလြုပနြိုငပြါပှီ…..
ads.com.mm အခမဲ့ကှောငြှာ website ကို အသုံးပှုမယဆြိုရငြ….
(၁) Designer တှရေဲ့ ဒီဇိုငြးတှကေို စွေးသကသြကသြာသာနဲ့ ပှနလြညစြုဆောငြးဖို့ရှာဖှနေိုငမြယြ
(၂) branded ပဈစညြးတှကေိုစွေးသကသြကသြာသာနဲ့ ဝယယြူနိုငမြယြ
(၃) ဝငငြှပှနေတြိုးလာနိုငသြလို ခွှတောရာလဲရောကပြါတယြ
(၄) ရောငြးသူနဲ့ ဝယသြူတိုကရြိုကခြွိတဆြကြ ဝယယြူနိုငတြာကှောငြ့ Fashion ဝါသနာပါသူ အခငြွးခငြွး မိတဆြှဖှေဲ့ နိုငပြါတယြ
(၅) ကိုယြ့ရဲ့ အရငြ Ex ကပေးထားတဲ့ အရုပတြှေ ၊ ဖိနပတြှေ၊ လကကြိုငအြိတတြှေ ကိုလညြး မလိုခငွတြော့ ရငပြှနရြောငြးလို့လဲရသေးတယနြော……
ဒါကှောငြ့မို့ ads.com.mm ကိုအသုံးပှုပှီး ဝငငြှပှနေတြိုးအောငြ ပွိုမတေို့ရဲ့ ဘီဒိုတှကေို အခုပဲရှငြးလိုကကြှရအောငြ……
Author hsulattPosted on January 21, 2016 January 21, 2016 Categories Ads.com.mm, OtherTags ဘီဒိုလဲရှင်းသွားမယ်…… ပိုက်ဆံအိတ်လဲဖောင်းလာမယ်…….
Previous Previous post: စာမေးပွဲအတွက် စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းအောင် …..
Next Next post: Single Ladies တွေ Valentine Day ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ